सरकारलाई दाउरा महंगो गर्न भनि देऊ |
सरकारलाई दाउरा महंगो गर्न भनि देऊ
महिलाको सुझाव : गरिब मारेर अधिकार आउँदैन
प्रकाशित मिति :2015-11-30 15:14:41
काठमाडौं, मंसिर १४ । लामो समयदेखिको तराई आन्दोलन र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कारण दिन प्रतिदिन जनजिवन अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । पेट्रोलयिम पदार्थ मात्र होइन अत्यावश्यक वस्तु औषधीसमेतको अभाव भएको छ ।
खासगरी शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्याँस नपाउँदा विहान बेलुका खाना पकाउने र समयमा बाबुआमा र छोराछोरीलाई खुवाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको महिला बताउँछन् ।
वर्तमान समस्या समाधानका लागि राज्यले र आन्दोलनरत तराई मधेसवादी दलहरूले के गर्नु पर्ला भनेर हामीले काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा भेटिएका महिलालाई सोधेका थियौं । समस्या समाधानको लागि सरकार र मधेसबादी दललाई महिलाको सुझाव यस्तो छ :
एउटा द्वन्द्व पार गरेर लामो समयमपछि मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । जारी भएको संविधानलाई हाम्रो र राम्रो भन्नुपर्ने बेलामा केही पक्षका मानिसहरू आफ्ना माग पुरा भएनन् भन्दै आन्दोलनमा छन् ।
आन्दोलनरत पक्षहरूलाई सरकारले चाडोे वार्तामा बोलाएर संवादको माध्यबाट समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ ।
आन्दोलनकारीका माग सहि र सत्य हुन् भने जनतालाई दुःख नदिई प्रस्ष्टताकासाथ अगाडि ल्याउनु प-यो । जे जस्तो भए पनि समस्याको समाधान वार्ताको माध्यबाट नै हल गर्नुपर्छ, न कि हिंसात्मक आन्दोलनबाट ।
मेरो घर कीर्तिपुर मच्छे गाउँ हो । म अहिले ६३ वर्षकी भए । आन्दोलन भएको कति भयो ? हामी भोकै मर्ने ? मधेसमा भएको कुरालाई सरकारले साम्य गर्नु प-यो । आन्दोलनकारीहरूको आन्दोलन लामो भयो छोड्नु प-यो । गरिब मारेर अधिकार आउँदैन भनि दिनु ।
ग्याँस आउँछ लुटालुट हुन्छ, बलियाहरूले लैजान्छन् । घर भूईंचालोले भत्केको ६ महिलन बित्यो खै सरकारले हेरेको ? ग्याँस र दाउरा छैनन् ।
कतिदिन फुको चिउरा खाएर बस्ने ? अब त त्यो पनि पाईंदैन रे भन्छन् । सरकारलाई दाउरा अझै महंगो गरिदिन भन्नु होला नानी । हामीलाई ग्याँस चाँडो पठाई दिन भन्नु । तपाई त केटी मान्छे थोरै दु:ख पाउनु भएको होला ? मैले त भनि साध्य छैन । दाउरा पनि सजिलै पाईंदैन । सरकारलाई दाउरा अझै महंगो गर्न भन्दिनु ।
मधेसका माग जायज छन् भने सम्बोधन गर्नुपर्छ । मधेसवादी दलहरूले आफ्नो माग पुरा गर्न गलत बाटो अपनाउनु हुँदैन , उहाँहरू पनि अलि लचिलो हुनुपर्छ ।
राज्य र मधेसवादी दल दुबैले मेरै गोरुका बाह्रै टक्का भन्यो भने अहिलेको अवस्थाले निकास पाउँदैन । दुबै एक कदम अगाडी बढेर समस्याको समाधन खोज्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने मारमा सर्वसाधारण जनता नै पर्दछन् ।
मधेसका जनताको लागि गरिएको आन्दोलनले देशभरका जनताको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझनैपर्छ । नाकाबन्दीको मार हामीले हरेक पाइलामा भोगेका छौँ । राष्ट्रियताको कुरामा हामी समस्यालाई सहन त गरेका छौँ तर, कत्तिसम्म गर्ने ?
वर्तमान समस्याको हल वार्ताबाट खोजिनुपर्छ । आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण पनि हुनुप-यो । अहिलेको समस्या राजनीतिक र कुटनीतिक विषय भएको कारण यसको हल जनताबाट भन्दा पनि राजनीति र कुटनीति तरिकाले वार्तामा बसेरै खोज्नुपर्छ । नाकाबन्दीको कारण दाउरादेखि बिजुलीबाट चल्ने सबै चुलो जम्मा पारेको छु । खाना खान नै नपाएपछि अरु के कुरा गर्ने ?
नाकाबन्दीको बारेमा राज्यको तर्फबाट भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्नु प-यो । मधेसवादी दलहरू आन्दोलनमा मात्र होइन आफ्ना जायज मागलाई लिएर वार्तामा बस्नु प-यो । संसदमा कुरा उठाउनु प-यो । नाकाबन्दीले चुलो नै निभ्यो । यो भन्दा ठूलो असर के हुन सक्छ ?
सबैभन्दा राम्रो कुरा सम्झौता हो । मधेसवादी दलले यसरी आन्दोलन गरेर देशलाई अराजकतामा लैजानु हुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर उहाँहरूलाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ । एकातिर भारतको नाकाबन्दी अर्कोतिर तराईको आन्दोलनले सबैभन्दा बढी समस्या शहरमा भाडामा बस्नेहरूलाई पारेको छ ।
घरमुलीहरूले घरभित्र दाउरा बाल्न दिँदैनन् । ग्याँस छैन, उनीहरूले के गरी खाने ? हेर्दा समस्याको मारमा ठूला होइन, सामान्य जनता छन् भन्ने आन्दोलनकारीले बुझ्नु प¥यो । सबै कुरामा बल मिच्याईं गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।
प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १४ गते सोमवार